Home Wararka Gudaha Gabadhii wejiga shoolad kaga qaraxday iyo geedkii ay isku dawaysay
Gabadhii wejiga shoolad kaga qaraxday iyo geedkii ay isku dawaysay
Wixii igu dhacay waxaan ku tilmaami karaa mucjiso kor ka timid.” Ayay Princess Ezeani ku qeexday qaabkii ay uga badbaaday shoolad ku qaraxday wejigeeda iyada oo ku sugan gurigeeda oo ku yaala magaalada Abuja ee dalka Nigeria.
Gabadhani 20 jirka ah ayaa ku riyoonaysay in ay noqoto gabadh dharka xayaysiisa ayaa shil ku dhacay kaga gubatay wejiga bishii nofeembar, 2021.
Maalinkii uu shilka dhacayay, waxay gashay jikada si ay cunto ugu diyaariso qoyskeeda, iyada oo aanan ka warhaynin in hooyadeed ay jikada kusii jirtay oo waxay karinaysay bariis, waxay kadib go’aansatay in ay diyaariso kalluun lagu cuno bariiska, balse ma aysan ka warqabin in hooyadeed aysan xirin shooladda.
Markii ay isku dayday in ay shiddo ayay ku qaraxday, waxaana markiiba la geeyay isbitaalka.
“Shilka kadib habeenkii maanan seexan jirin sababtoo ah hurdada ayaan ku qarwayay , waxaana ii muuqanayay aniga oo dabka ku gubanaya” ayay tiri Princess Rseani. Waxa ay sheegtay in maalinkii inta badan ay ooyi jirtay, islamarkaasna aad u murugeysnayd.
Kadib la talin ay hooyadeed ka heshay, waxa ay gabadhani dareentay dhiironaan iyo kalsooni, iyada oo sii wadatay hawlaheedii caadiga ah.
Xagga daweynta haweenay habaryarteed ah ayaa biloowday in ay wejiga ka mariso malab iyo dacar, taas oo horseedday in maqaarka uu kusoo laabto sidiisii hore, kana bogsado dhaawacyadii kasoo gaaray gubniinka.
Muddo lix bilood ayay ku bogsatay gabadhani, iyada oo baraha bulshada soo dhigtay dedaalka daweynta , taas oo ay ka dhalatay falcelin badan oo dadka ku xiran degelka Twitter-ka ee gabadhi.
Dadka qaar ayaa aamini waayay in ay arrintani run tahay, shilkana uu dhacay. Islamarkaasna ay iyada wejiga wax marsatay.
“Dad badan ayaa u maleeyay in aan wax marsaday, ama qalliin is qurxin ah galay, taas waan la yaabay” ayay tiri Princess Ezeani.
Hadda waxa ay gabadhani qorsheynaysaa in ay ku laabato iskuulka si ay u barato cilmiga dawooyinka
Previous articleGuddiga Gurmadka abaaraha oo Warbixin siiyay Ergayga gaarka
Next articleHay’adda Nabad Sugidda: Howlaha ka waawayn magac baddalidda ee hor yaalla Mahad Salaad
DEG DEG:- Nin hubeysan oo weerar ku qaaday xarun laga dukaamaysto
Donald Trump Oo Waxba Kama Jiraan Ku Tilmaamay Marag Ay Gabadhiisa...